Horyaal Weyn Oo Maanta La Kansalayo, Kooxda Koobka La Siinayo & Naadiyada Heerka 2aad Loo Dirayo - Gool24.Net
Horyaal Weyn Oo Maanta La Kansalayo, Kooxda Koobka La Siinayo & Naadiyada Heerka 2aad Loo Dirayo
Tartamada la kansalayo ee horyaallada Yurub ayaa soo badanaya, waxaana maanta lagu dhawaaqayaa war kale oo aan la jeclaysan doonin oo go’aan lagaga gaadhayo mid ka mid ah tartamada waaweyn.
Kubadda cagta ayaa iftiin ay taageereyaasha iyo kooxuhuba ku diirsadeen usoo baxay Sabtidii markii dib loo bilaabay horyaalka Bundesliga ee waddanka Jarmalka, waxaana la filayay inuu tusaale u noqdo waddamada kale oo ay sidooda oo kale ugu soo laabtaan ciyaaraha.
Bundesliga oo ka mid ah shanta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaa waxa uu qaatay go’aan lid ku ah Ligue 1-ka Faransiiska oo gebi ahaantiiba la kansalay, koobkana la siiyey PSG, waxaana kulamadii dhacay Sabtidii iyo Axaddii laga fiirsanayay dunida oo dhan.
Horyaalka waddanka Netherlands ee Eredivisie ayaa go’aankii ugu layaabka badnaa ka qaatay xili ciyaareedkiisa oo waxba kama jiraan ka dhigay horyaalkii xili ciyaareedka, iyadoo koobkana loo diiday dhamaan kooxaha, sidaas oo kalena aanay jirin cid heerka labaad loo diray. Taas beddelkeeda, Belgium ayaa koobka siiyey kooxda hoggaanka haysay, ciyaarahana halkii ay ku hakadeen ku joojiyey.
Sidaas oo ay tahay, waxa maanta indhuhu ku foogan yihiin kulan ay yeelanayaan guddida sare ee maamulka horyaalka Scotland ee SFPL, kuwaas oo ku dhawaaqi doona in aan dib loogu soo laaban doonin xili ciyaareedka.
Shirkan oo dhici doona marka ay saacadda BST tahay 10-ka subaxnimo ayaa waxa lagu shaacin doonaa in horyaalka Scottish Premier League la kansalay, waxaana koobka la siin doonaa Celtic oo horyaalka sannadka loo calseemo saari doono.
Horyaalka ayaa lagu go’aamin doonaa farqiga dhibcaha ayaa waxa heerka labaad loo dirayaa kooxda Hearts.
Go’aankan ayay xidhiidhka kubadda cagta Scotland iyo maamulka horyaalka ee SPFL ay qaateen markii ay UEFA u caddaysay in aan tartamada Yurub ee xili ciyaareedka dambe.
Dhamaan kooxaha horyaalka heerka koowaad ayey maamulku la tashadeen Jimcihii, waxaana sidoo kale go’aankan oo kale laga qaatay horyaalka heerka labaad ee dalkaas ee Championship-ka loo yaqaano, waxaana la guddoonsiiyey koobka Dundee United.a